Burcadbadeedda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Publicerat torsdag 18 december 2008 kl 15.14
Maraakiib hor leh ee lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya.
Maalintii Arbacada waa shaleyto’e ayey saddex markab oo hor leh gacanta u galeen burcad badeedda xeebaha soomaaliya. Middaasina ay ku soo beegantay iyadoo golaha ammaanka ee heyadda qaramada midoobey xubnaheedu si wada jir ah ugu codeeyeen dagaal lala galo burcad badeedda ibtilada ku heysa marinka gacanka cadmeed iyo xeebaha badweynta Hindiya.
Go’aanka uu golaha ammaanku qaatay ayaa u ogolaanaya cidammada shisheeye iney bucadda kula dagaalami karaan dhanka badda iyo barigaba, waana gudaha Soomaaliya.
Dawladda Iswiidhen oo xubin ka ah ururka midowga Yurub ayaa go’aan ey waddammadaasi gaareen ku dhawaaqday bishii tagtay iney ka qayb qaadan doonaan waddammo ay ka mid tahay ciidamadda badda ee loo direyo carriga gacanka cadmeed iyo badweynta hindiya, islamarkaana aaney waxba qorshahaa ka badalayn go’aankan cusub ee guddiga ammaanku.
Qorsha loogu magac daray Operation-kii Atlanta eyna gaareen waddammada xubnaha ka ah ururka midowga Yurub ayey ka qayb qaadanayaan sagaal waddan, qaar haddaba ka howlgalaan, Iswiidhen iyo Beljim-na ey gadaal kaga darsami doonaan.
Falalka burcad badeedda ayaa fara ba’an ku haya 16 illaa 20-ka kun ee markab ee halkaa isaga gooshta sannadkii.
Horey barnaamij idaacaddeena uga baxay ayaad ku maqasheen doktor Cabdimajiid Nuur Cismaan oo maqaal dheer ka qoray amuurtaa.
Wareysigii Dr. Cabdi Majiid Nuur Cusmaan